Il'gynoth, fon'ny kolikoly - Emerald Nightmare- Preview | Band, Legion, Emerald Nightmare | WoW Guides | WoW Guides
Il'gynoth, fon'ny kolikoly - Emerald Nightmare- Preview
Ana Martin | | Bands, Legiona, Emerald Nightmare
Tongasoa eto amin'ity topi-maso nataon'ny Legion ity. Ny lehiben'ny androany dia Il'gynoth, Heart of Corruption, boss fahatelo an'ny andian-tsarin'ny Emerald Nightmare amin'ny fahasahiranan'i Raid Finder.
1 Il'gynoth, Fon'ny kolikoly
Il'gynoth, Fon'ny kolikoly
Mipetraka ao anatin'ny hazon'izao tontolo izao izao, Il'gynoth dia fisehoan'ny horohoro izay mipetraka ao afovoan'ny Nightmare. Vondrona kolikoly io, orinasa tsy tokony hisy. Misitrika amin'ny tany ny tentakeliny ary mipoitra amin'ny endrika maso tsy mihetsika sy rantsam-batana mahatsiravina.
Ny zavatra voalohany tsy tokony hotadidina dia ny nahafahantsika nisedra an'ity lehibeny ity tamin'ny fahasarotan'i Raid Finder, izay afaka manome fomba fijery diso momba ny fahasarotan'io.
Raha vao jerena dia toa tsotra noho ny fahasarotana, saingy misy zavatra vitsivitsy tsy tokony ho adino ao amin'ity lalao ity, noho izany mampanantena izy fa hahafinaritra indrindra amin'ny fiovan'ny dingana; raha mijanona ao anaty ianao dia maty.
Dingana 1: ny tany rava
Hanomboka ny fihaonana isika amin'ny alàlan'ny fiatrehantsika ireo tentacles sy ny mason'i Il'gynoth miafina. Tokony hotadidintsika fa ny maso dia tsy mahazo fahasimbana mivantana, raha tsy rehefa maty eo am-pelatanany ireo Nightmare Icores (slugs).
Ka ny hataontsika dia ny manafoana ireo tanjona sisa tavela, ankoatr'izay, isaky ny manafoana tentacle isika dia hiseho ny icores fa hitondra eo akaikin'ny maso isika ary hanimba azy.
Hahita karazana tentacles maromaro isika:
Tranon'ny maso mahafaty: tsy maintsy manelingelina ny fampijaliana ara-tsaina isika satria io fahaizana io dia manimba ny aloka isaky ny 2 segondra.
Tranolay manao kolikoly: izay tsy maintsy esorintsika faran'izay haingana, satria mandoa kolikoly, manimba mpilalao akaiky ary mamorona dobo kolikoly Nightmare.
Tentacle manjaka: Ity tanjona ity dia tsy maintsy atao tanky hialana amin'ny fahasimbana avy amin'ny Disintegrating Roar izay hataony raha tsy misy hira, ary ny tanky dia mahazo Fury of Torment, fahaiza-manao izay mamoaka fanafihana mahery vaika amin'ny tanjona kendreny isaky ny 0.8 segondra 470.000 ny fahasimbana ara-batana.
Ny ambiny amintsika dia tsy maintsy mitandrina, indrindra ny melé, satria ity tentacle ity dia hametraka mpilalao miaraka amin'i Slam amin'ny tany, ary hitifitra amin'ny lalana misy ilay mpilalao ary miteraka fahasimbana ho an'ireo rehetra milahatra.
Ho fanampin'izay, a Horohoro mahatsiravina. SYIty minion ity dia tsy maintsy atao tanky ary esorina haingana araka izay tratra, satria izy no mamorona dobo ny kolikoly Nightmare ary miatrika fahasimban'ny aloka amin'ny tsipika mahitsy manoloana ny horohoro. (na dia ao anatin'ny fahasahiranana manafika aza dia hisy fiatraikany amin'ny tanky io fahavoazana io)
Mandritra ny dingana voalohany dia mihamaro ny minion dia ho hita, rehefa hamono azy ireo ny icores, izay hiarahantsika mijery ny maso hanimba azy, sns. Mandra-pahatapitry ny farany.
Dingana 2: Ny fon'ny kolikoly
Rehefa mitranga izany dia miroso amin'ny dingana faharoa isika, amin'ity fotoana ity dia hisokatra ho antsika ny lalana mankany amin'ny Fon'ny Kolikoly.
Hanipy ny herim-po isika ary hiezaka hampidina ny fon'ny olona araka izay tratra, satria tsy manam-potoana firy isika ary, na dia amin'ity fahasarotana ity aza dia resintsika izany, dia tsy ho toy izany amin'ny fahasahiranana avo kokoa.
Na dia mifantoka amin'ny fampidinana ny fiainana amin'ny Heart aza isika dia tsy maintsy mitandrina amin'ny Rà maloto, fahaizana manamarika mpilalao iray izay hipoaka aorian'ny 8 segondra, ary miteraka fahasimbana betsaka amin'ireo mpilalao izay ao amin'ny taribeny.
Rehefa mankaleo antsika Il'gynoth dia hampiasa fanonerana maizina izy, fahaizany manidy varavarana indray ary hamono ny olona ao anatiny.
Raha mbola tsy resintsika Il'gynoth tamin'izany dia hanomboka indray ny dingana voalohany.
Ary hatreto ny famintinana ny Il'gynoth, manantena aho fa hanampy anao amin'ny fihaonanao voalohany aminy ity, arahabaina ary hahita anao amin'ny horonantsary manaraka.
Ny mpilalao dia manomboka ny fiakarana amin'ny alàlan'ny ady amin'ny tentacles ary hibitsika ny mason'i Il'gynoth, raha manakana ny lalana mankamin'ny fon'ny hazo kosa ny maso mampitolagaga. Rehefa resy ireo tentacles ireo dia mipoitra ny globules Nightmare ichor animated, izay azon'ny mpilalao manimba eo akaikin'ny maso hanimba azy.
Rehefa resy ny maso dia azon'ny mpilalao atao ny miditra ao amin'ilay banga mba hanimbana mivantana an'i Il'gynoth mandritra ny fotoana iray, ary aorian'izay dia miverina mamerina mamaky ny fidirana amin'ny fidirana ary mamono izay sisa tavela ny mpilalao. Miverina izany mandra-pandresen'ny mpilalao an'i Il'gynoth.
Manalavira ny fanafihana rehefa iharan'ny vokatry ny kolikoly mandoa.
Manakorontana ny fampijaliana sain'ny maso amin'ny fahafatesana.
Alaharo ireo icores an'ny Nightmare mifantoka aminao ao amin'ny Il'gynoth's Eye rehefa tsy dia salama izy ireo, ary miandry mandra-pahatongan'ny maso akaiky hamono azy ireo.
Halaviro ny mpilalao nosafidian'i Slam tamin'ny tany ary alaviro ireo mpilalao hafa rehefa tonga aminao izany.
Ny fahatezerana mampijaly ny tentacles manjaka ary ny mason'ny nofy ratsy amin'ny nofy ratsy dia mitondra fahasimbana lehibe amin'ny fiara mifono vy.
Atsaharo ny kolikoly.
Sariho ireo icores Nightmare nifantoka taminao tao amin'ny Mason'i Il'gynoth rehefa ambany ny fahasalamany.
Ny fahatezerana mampijaly ny tentacles manjaka, ary ny mason'ny nofy ratsy ny nofy ratsy dia ratsy.
Mampihoron-koditra ny kolikoly Nightmare - mampihodinkodina azy ireo hanala ny fahasimbana atrehin'izy ireo.
Halaviro ny mpilalao kendren'i Slam amin'ny tany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: WoW Guides » Bands » Il'gynoth, fon'ny kolikoly - Emerald Nightmare- Preview
Curiosities of Wow: Fizarana XXVIII
Snoak Peek amin'ny fanafihana ho avy ao amin'ny Legion Pre-Patch